Mgbe gị na music na nkiri ọba akwụkwọ na-ibu, ọ bụ mgbe niile mma ka a hazie.
E nweghị ụkọ nke ezigbo iTunes n'ọbá akwụkwọ oru si n'ebe ma ndị a bụ na n'elu ise mgbodo:
N'elu 5 iTunes Library Managers bụ:
4. TuneUp iTunes Library Management ngwa mgbakwunye
5. iTunes Library Manager MacUpdate Desktọpụ 6
Nke a bụ a juputara ọkachamara ngwọta maka oru nke iTunes ọba akwụkwọ. Ọ bụ ezigbo maka niile diski jockeys, music ụtụ na ndị audiophiles ndị chọrọ ịnọgide na-enwe a Ịhazi na haziri ahazi egwú dijitalụ ndụ. SuperSync-enye ohere ọrụ iji hazie na tụnyere ma jikota iTunes ọba akwụkwọ gafee niile onye kọmputa, Macs na iOS Ngwa. Ọ ga-enyekwara na ihichapụ oyiri ihe. Ọ nwere ọzọ na-akpali atụmatụ dị ka akuko nke na-efu tracks nke pụrụ ịbụ nnọọ kemfe na management nke nnukwu catalogs nke music multiple isi mmalite. Nanị handicap na SuperSync bụ na ọ pụrụ nanị ga-enweta na website na adịghị n'ime usoro ihe omume
Ọ na-ekwe ka ndị ọrụ na jikwaa music na ndị ọzọ na media faịlụ na iOS ngwaọrụ na-akpalikwa ha si n'otu ebe ọzọ na-enweghị na-aga site mkpa nke ịbanye iTunes.
TunesGo enye a sleek interface site na nke ndị ọrụ nwere ike ịnweta niile atụmatụ nke ngwa. E nwere nnukwu buttons iji nyere aka chọpụta dị iche iche na omume na ntụziaka doro anya na-eso na enyemaka ọrụ maara ihe na mgbe jikọọ. Ọnọdụ Ogwe egosi otú ngwa ngwa ihe na-kwajuru. Niile loaded faịlụ nwere ike previewed site na ngwaọrụ gị tupu ha na-exported ka họrọ ọnọdụ. Otutu ngwaọrụ nwere ike jikọọ na otu oge, na-eme data transfer usoro streamlined. TunesGo bụ dakọtara na iPhones 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6 / 5S / 5 / 4S, iPod Touch 5, iPod Nano, iPod Omuma, iPad Obere, ọhụrụ iPad na iOS 9. The handicap na TunesGo bụ na ọ bụ onye na-adịghị na-ewe oge ụfọdụ maka usoro ihe omume iji mara na data si iPhones.
Ọ na-ekwe niile iTunes ọrụ iji hazie multiple music ọba akwụkwọ n'etiti dị iche iche nchekwa ma na-eso na music n'etiti ọtụtụ ọrụ na ngwaọrụ. Ọrụ na-enwe ike idetuo music n'etiti iche iche n'ọbá akwụkwọ ma na-ha Fim na play adabere emebibeghị. Nke a na-enyere ndị ọba akwụkwọ ka-agbajikwa ala n'ime nta nkeji na merged e mesịrị na ndị ka ibu. Ọ na-enye ohere ọrụ idozi niile nwụrụ anwụ music tracks onye faịlụ nwere ike esiwo na-efu. Ọ bụ dakọtara na OS X 10.10 na iTunes 12.
Nke a ngwa nwere ike ọcha music faịlụ na-adịghị nwere kwesịrị ekwesị kpọọ metụtara artist aha, track nọmba na Genres. Ọ ga-enyekwara ịchọta cover nkà ọ bụrụ na ọ na-efu. Ọ na-enyere na alerting ọrụ niile Obodo concerts ma ọ bụrụ na ha mmasị artists na-pụtara. Ọ akwusila na ihe ọma niile music ọdịnaya site na internet dị ka YouTube videos na Google News jupụta na-ege ntị ahụmahụ. Ya echichi dị mfe. Ọ bụ dakọtara na ma Mac na PC nsụgharị nke iTunes. Ọ ga iṅomi ọbá akwụkwọ n'ime sekọnd. Ya mwepu bụ na ya free version bụ kama mmachi na ọ bụghị n'ụzọ zuru ezu arụmọrụ. Usoro ihe omume ga Hound a onye ọrụ na-aha mgbe ọ bụla ọ ma ọ bụ ọ ga-emepe ya.
Rating site Download.cnet.com Editors: 2.5 / 5.0
A na ngwa ga-eme ka ndabere mbipụta nke music ọba akwụkwọ nke iTunes, ha nchekwa data faịlụ na iTunes Mmasị. Nke a na-enyere ndị ọrụ na-azọpụta multiple ọba akwụkwọ mfe. Nhazi nke mmasị nwere ike Ewepụtara enweghị ọtụtụ ihe isi ike na ya nwere ike kwajuru mgbe ọ bụla ị na-amasị. Ọ bụ dakọtara na iTunes 10.4 na OS X 10.7 odum. The handicap bụ na ọ na-adịghị arụ ọrụ na Ike PC ngwaọrụ
> Resource> iTunes> Top 5 iTunes Library Managers